March 2019 – TKBC Bible
လုကာ ၁၂:၁-၂၀ 1ထိုအခါ အတိုင်းမသိများစွာသော လူတို့သည် စုဝေး၍ အချင်းချင်း နင်းမိမတတ်နေကြသည်ရှိသော်၊ ယေရှုသည် တပည့်တော်တို့အား မိန့်တော်မူသည်ကား၊ လျှို့ဝှက်ခြင်းတည်းဟူသော ဖာရိရှဲတို့၏ တဆေးကို ရှေ့ဦးစွာ ကြဉ်ရှောင်ကြလော့။-Ref2ဖုံးထားလျက်ရှိသမျှတို့သည် ပွင့်လိမ့်မည်။ ဆိတ်ကွယ်ရာ၌ ရှိသမျှတို့သည်လည်း ထင်ရှားလိမ့်မည်။-Ref3မှောင်မိုက်၌ သင်တို့ပြောသမျှသောအရာများကို သူတစ်ပါးတို့သည် အလင်း၌ နားကြားကြလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် အခန်းထဲမှာ နားအပါး၌ ပြောသောအရာများကို အိမ်မိုးပေါ်မှာ ဟစ်ကြော်ကြလိမ့်မည်။ ကြောက်​သင့်​သူ (မ ၁၀:၂၈-၃၁)4ငါ့အဆွေတို့၊ သင်တို့အား ငါဆိုသည်ကား၊ ကိုယ်ခန္ဓာကိုသတ်၍ နောက်တစ်ဖန် အလျှင်းမပြုနိုင်သော သူတို့ကို မကြောက်ကြနှင့်။-5အဘယ်သူကို ကြောက်ရမည်နည်းဟူမူကား၊ ကိုယ်ခန္ဓာကိုသတ်ပြီးမှ […]
ဂလာတိ ၂:၁၆-၂၁ 16 ယေရုခရစ်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ကြသည်ကို၊ အပြစ်ထင်ရှားသော တစ်ပါး အမျိုးသားမဟုတ်ဘဲ၊ ဇာတိအမျိုးအားဖြင့် ယုဒလူဖြစ်သောငါတို့သည် အမှန်သိသည်နှင့်အညီ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့မရောက်၊ ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းငှာ၊ ငါတို့ပင် ယေရှုခရစ်ကို ယုံကြည်ကြပြီ။ အကြောင်းမူကား၊ ပညတ်တရား၏ အကျင့်အားဖြင့် အဘယ်သူမျှ ဖြောင့်မတ်ရာသို့ မရောက်နိုင်ရာ။- 17 ခရစ်တော်အားဖြင့် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ရောက်ခြင်းငှာ ငါတို့သည် ကြိုးစားလျက်ပင်၊ အပြစ် ထင်ရှားသောသူ ဖြစ်သေးသည်မှန်လျှင်၊ ခရစ်တော်သည် အပြစ်တရားကို ပြုစုသောသူဖြစ်သလော။- 18 ထိုသို့မဖြစ်နိုင်ရာ။ အထက်က ငါဖြိုဖျက်သော အရာကို နောက်တစ်ဖန် ငါတည်ဆောက်ပြန်လျှင်၊ ကိုယ်အပြစ်ရှိသည်ကို ထင်ရှားစွာပြ၏။- […]
ယာကုပ် ၁:၁၆-၁၈ 16 ငါချစ်သောညီအစ်ကိုတို့၊ အလွဲမယူကြနှင့်။ ကောင်းမြတ်စုံလင်သော ဆုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည် အလင်းတို့၏ အဘထံတော်က သက်ရောက်သည်ဖြစ်၍၊ အထက်အရပ်မှ လာကြ၏။- 17 ထိုအဘသည် ရွေ့လျော့တိမ်းယိမ်းခြင်းမရှိ၊ ပြောင်းလဲခြင်းအရိပ်နှင့် ကင်းလွတ်တော်မူ၏။- 18 နိမ္မိတသတ္တဝါတို့တွင် ငါတို့သည် အဦးသီးသောအသီးကဲ့သို့ ဖြစ်စေခြင်းငှာ၊ သမ္မာတရားစကားအားဖြင့် မိမိအလိုတော်အတိုင်း ငါတို့ကို ဖြစ်ဖွားစေတော်မူ၏။ ကြား​နာ​ခြင်း​နှင့်​ကျင့်​သုံး​ခြင်း ယၤကိာ် ၁:၁၆-၁၈ 16 ယဒီပုၢ်ဝဲၢ်လၢတၢ်အဲၣ်အီၤသ့ၣ်ဧၢ, သုတဒိးတၢ်လီန့ၢ် သုတဂ့ၤ. 17 ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤအဝါ, ဒီးကယဲၢ်တၢ် ဟ့ၣ်အလၢအပှဲၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ်, ဟဲလီၤလၢတၢ်ကပီၤ အပၢ်လၢထးန့ၣ်လီၤ.တၢ်ကဒံကဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဃၣ်က့ၤ အကဒုမ့ၢ်ဂ့ၤ,တအိၣ်ဘၣ်ဒီးအီၤဘၣ်. 18 ဖဲအသးဒၣ်ဝဲ, အဝဲဒၣ်ထီၣ်ဖိပှၤလၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအကလုၢ်,ဒ်သိးပက ကဲထီၣ်အတၢ်တ့တဖၣ် အတၤသၣ်ဆိ တကလုာ်န့ၣ် လီၤ.
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၆:၄၇-၅၃ ၄၇ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ ငါ့ကို ယုံကြည်သောသူသည် ထာဝရအသက်ကိုရ၏။ ၄၈ငါသည်အသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ၄၉သင်တို့ဘိုးဘေးများသည် တော၌မန္နကိုစားလျက် သေရကြ၏။ ၅၀ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောမုန့်ကို စားသောသူသည် သေခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်၏။ ၅၁ငါသည်ကောင်းကင်မှဆင်းသက်သောအသက်မုန့်ဖြစ်၏။ ဤမုန့်ကို စားသောသူမည်သည်ကား၊ အစဉ် မပြတ်အသက်ရှင်လိမ့်မည်။ ငါပေးသောမုန့်ကား၊ လောကီသားတို့၏ အသက်အဘို့အလိုငှါ စွန့်သောငါ၏ အသားပေတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏။၅၂ထိုအခါ ယုဒလူတို့က၊ ဤသူသည်မိမိအသားကို ငါတို့စားစရာဘို့အဘယ်သို့ ပေးနိုင်သနည်းဟု အချင်းချင်း ငြင်းခုံကြ၏။ ၅၃ယေရှုကလည်း၊ ငါအမှန်အကန်ဆိုသည်ကား၊ လူ၏အသားကိုမစား၊ အသွေးကိုမသောက်လျှင် သင် တို့၌ အသက်မရှိ။ ယိၤဟၣ် ၆:၄၇-၅၃ 47 ယစံးဘၣ်တဲဘၣ်သုတီတီလိၤလိၤ, ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤယၤန့ၣ်, အိၣ်ဒီးတၢ်မူအထူအယိာ်လီၤ. 48 ယဲဒၣ် အံၤ, ယမ့ၢ်တၢ်မူအကိၣ်လီၤ. 49 သုပၢ်တဖၣ်အီၣ်မၤနၤ လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢဒီးသံဝဲလီၤ. […]
ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်။ ၁:၁-၅ ၁အစဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော် သည်လည်း ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ၂ထိုနှုတ်ကပတ်တော်သည် အစဦး၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိ၏။ ၃နှုတ်ကပတ်တော်သည် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနှင့် ကင်း လွတ်လျက်ဖြစ်သော အရာတစုံတခုမျှမရှိ။ ၄ထိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ အသက်ရှိ၏။ ထိုအသက်သည်လည်း လူတို့၏အလင်းဖြစ်၏။ ၅ထိုအလင်းသည် မှောင်မိုက်၌ လင်း၍ မှောင်မိုက်သည် မခံမယူ။ ယိၤဟၣ် ၁:၁-၅ 1လၢထံးလၢသီန့ၣ်တၢ်ကလုၢ်အိၣ်ဝဲ, ဒီးတၢ်ကလုၢ်န့ၣ် အိၣ်ဝဲဒီးယွၤ, ဒီးတၢ်ကလုၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ယွၤလီၤ.2အဝဲဒၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးယွၤလၢထံးလၢသီလီၤ.3ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ်ခဲဆ့ အံၤကဲထီၣ်ဝဲလၢအစုပူၤ, ဒီးတၢ်လၢအကဲထီၣ်ဝဲန့ၣ်, တ ကဲထီၣ်ဘၣ်လၢအစုပူၤဒီး, တအိၣ်ဘၣ် နီတမံၤဘၣ်.-4တၢ်မူအိၣ်ဝဲလၢအပူၤ, ဒီးတၢ်မူန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ် ကပီၤလီၤ. […]